Florentino Perez Oo 140 Milyan + Marco Asensio Ku Doonaya Sadio Mane-Miyay Liverpool Aqbali Kartaa? - Gool24.Net
Florentino Perez Oo 140 Milyan + Marco Asensio Ku Doonaya Sadio Mane-Miyay Liverpool Aqbali Kartaa?
Madax waynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez ayaa samayna wax walba oo awoodiisa ah si uu Zinedine Zidane uga caawiyo in uu u soo iibiyo ciyaartoy muhiim ah oo muhiimadii xili ciyaareedkan ka maydhi kara.
Zinedine Zidane ayaa labadii bilood ee La Liga ugu danbeeyay si xun ugu soo dhibtoonayay Real Madrid isaga oo wax xal ah u waayay in uu sare u soo qaado kooxdii ay Julen Lopetegui iyo Santiago Solari ay ku soo fashilmeen.
Laakiin Florentino Perez iyo Zinedine Zidane ayaa ka shaqaynaya sidii ay Liverpool kaga heli lahaayeen xidiga saamayna badan ee Sadio Mane kaas oo ay lacag iyo ciyaartoy ku doonayaan.
Wargayska Don Balon ee Spain ka soo baxa ayaa shaaciyay in Florentino Perez uu diyaar u yahay in uu Sadio Mane ku dalbado 140 milyan yuro isla markaana uu heshiiska qayb ka noqdo Marco Asensio.
Liverpool ayaa hore u doonaysay saxiixa Marco Asensio laakiin Jurgen Klopp ayaan la filayn in uu aqbali karo bixitaanka Sadio Mane kaas oo uu la shaqayntiisa ku riyoonayay tan iyo markii uu Klopp maamulayay Dortmund.
Sadio Mane ayaa xili ciyaareedkan kabta dahabka ah ee gool dhalinta Premeir League kula guulaystay Mohamed Salah iyo Aubameyeng oo ay min 22 gool xili ciyaareedka ugu dhamaysteen.
Laakiin Mane ayaa xili ciyaareedkan ahaa awoodii ugu badnayd ee Liverpool soo gaadhsiisay finalkii Champions League isaga oo gool dhalin iyo heer shaqo oo aad u sareeya soo sameeyay.
Iyada oo ayna Liverpool doonayn in ay xagaagan suuqa in badan ku mashquusho ayaan la filayn in dalabka 140 ka milyan yuro iyo Marco Asensio iskugu jiraa aanu qancin karin Liverpool.
Real Madrid ayaa sidoo kale la sheegay in ay wada hadal hordhac ah la yeelatay wakiilada Mohamed Salah taas oo la micno ah in laba ka mid ah saddexda weerarka ee Liverpool ay Madrid xiisaynayso.
Zidane ayaa intii aanu shaqada Madrid iska casilin waxa uu doonayay in uu Sadio Mane kala soo wareego Liverpool balse markale ayay Madrid soo celisay xiisihii ay xidiga reer Senegal u qabtay.